MIANDRY VAHAOLANA :: Mitohy ny fitokonan’ireo mpiasan’ ny orinasa Kraoma • AoRaha
MIANDRY VAHAOLANA Mitohy ny fitokonan’ireo mpiasan’ ny orinasa Kraoma
Tsy nisy vahaolana. Nambaran’ny solontenan’ny mpiasa eo anivon’ny orinasa Kraomita Malagasy na Kraoma fa hanohy ny hetsika efa natombony izy ireo raha fitokonana fanairana no efa natao tao anatin’ny telo andro.
Hisy ihany koa ny fivoriana hotanterahin’izy ireo mahakasika ny mety ho tohin’ny fitokonana anio, raha ny fanazavan’ny solontenan’ny mpiasa eo anivon’ity orinasa ity . Voalaza mantsy fa efa nisy ny fihaonana teo amin’ny solontenan’ny mpiasa ao amin’ity orinasa ity tamin’ny Filoham-panjakana mpisolo toerana, omaly.
« Tsy misy ny zavatra tapaka nandritra izany fihaonana izany satria nivaona ny fifanarahana.Tonga nanatrika izany mantsy ireo rosiana. Izahay nefa tsy afaka mivory raha misy azy ireo », hoy ity mpiasa iray eo anivon’ny orinasa Kraoma ity, omaly. Nanamafy ihany koa ity solontenan’ny mpiasa ity fa tsy mivadika amin’ny fanapahan-kevitra efa noraisiny teo aloha ireo mpiasa eo anivon’ny orinasa.
Etsy an-danin’izany nanamafy ity farany fa hiroso amin’ny dingana mafimafy kokoa izy ireo hitadiavana izany vahaolana izany. “Tsy hiara-miasa amin’ireo Rosiana intsony izahay. Mamotika sy mambotry ny firenena izy ireo ary mamono ny mpiasa ihany koa”, hoy ihany ny fanazavana voaray omaly. Araka ny fantatra, mbola manohy ny fitokonana ihany koa ireo mpiasa rehetra any amin’ny faritra.